Samsung ga-eweputa 7 Cheta na 6 GB Ram na 128 GB nchekwa | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ bụ asịrị na-agbasa n'ihu ngosi nke gọọmentị nke ọhụụ 7, asịrị na Samsung na-esote phablet ga-enwe 6GB Ram, otu RAM nke gaara eme ka ngwaọrụ ahụ bụrụ ụgbọelu. Mana ka egosiputara njirimara nke ihe ngosi ohuru ohuru, anyi puru ihu otu RAM nke ihe omuma ohuru a bu nani 7 GB, otutu malitere ileba anya na isi iyi nke asusu ndi ahu. Na mgbakwunye, ọzọ asịrị, nke na-adịghị mkpa nke ukwuu, bụ nke kwuru na isi ihe nlereanya ga-4 GB, ihe anyị na-apụghị ịhụ na ngosi ma, ebe ọ bụ na ihe nlereanya ahụ rutere ahịa na 128 GB, enwe ike ịgbasa ebe nchekwa ahụ ruo 64 GB site na kaadị SD.
Mana maka ndị hụrụ ngwaọrụ a n'anya, ekwesịrị ikwu na ọ dị ka ọ dị n'ikpeazụ asịrị ndị ahụ ziri ezi ma o doro anya na ọ dị na TENAA, Ndi oru nlezianya nke China maka nkwukọrịta, Samsung na-ezube ịmalite ihe ngosi nke 6 GB nke Ram na ihe ruru 128 GB nke nchekwa dị n'ime. Ahụ a bụ nzọụkwụ mbụ maka ngwaọrụ iji ruo ahịa na na maka oge ọ na-abanye n'ime nje nke China, ọ nwere ike igosi na ụdị a nwere ike ịdị na ahịa ahụ.
Ihe anyị na-amaghị bụ ụgwọ e nwere ike ịnweta ngwaọrụ a. Ọ bụrụ na ihe atụ nwere 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa ga-akụ ahịa na gburugburu 850 euro, ihe nlere a kariri euro 1.000, ma o yikarịrị ka ọ gaghị eru ahịa niile ebe ndị ọrụ ga-achọ ya. Ọ ghọtaghị ụdị mmegharị a nke Samsung, na-ebupụta ụdị abụọ nke ngwaọrụ ọhụrụ ma na-egbochi inweta ya na mpaghara. Mgbe anyị na-eche ọbịbịa nke ngwaọrụ ọhụrụ a na ahịa, ị nwere ike ile anya na atụnyere n'etiti Galxy Note 7 na Samsung Galaxy S7 Edge na anyị bipụtara na Ngwaọrụ Actualidad.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung ga - ebido 7 Note na 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa
IBM jisiri ike mepụta akwara ozi